चिकित्सा विज्ञानलाई चुनौती, भर्जिन युवतीको कसरी बस्यो गर्भ ? वास्तविक बुझेपछि डाक्टर नै परे छक्क « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
चिकित्सा विज्ञानलाई चुनौती, भर्जिन युवतीको कसरी बस्यो गर्भ ? वास्तविक बुझेपछि डाक्टर नै परे छक्क
काठमाडौं । चीनमा एक अनौठो घटना भएको छ । बच्चा जन्माएकी युवतीले आफू भर्जिन रहेको र कसरी बच्चा भयो भने जिज्ञासा राखेकी छन् । चीनको गुइयांग शहरमा आफ्नो पेट दुखेको भनेर अस्पतालमा भर्ना भएकी युवतीको पेटको उपचारका क्रममा उनी गर्भवती भएको खुल्यो । चिकित्सकहरुले सुरुमा उनी गर्भवती भएको भन्दा त उनले पत्याइनन् । आफूले कहिल्यैपनि कोही पुरुषसँग सम्भोग नगरेको दाबी गर्दै ती युवतीले आफ्नो कुनैपनि ब्वायफ्रेण्ड नभएको र आफू पूर्णरुपमा भर्जिन भएको दाबी गरेको छ ।
आफू कुमारी रहेको दाबी गर्दागर्दै उनले यही फेब्रुअरी १५ मा बच्चा जन्माएकी छन् । लगातार आफू भर्जिन नै भएको दाबी गर्दै परीक्षण गर्न माग गरेपछि चिकित्सक र परिवारका सदस्यहरु अचम्ममा परे। कतै मादक पदार्थको नशामा यौन सम्बन्ध कायम गरिएको पो थियो कि ? भनेर चिकित्सकले राखेको जिज्ञासामा युवतीले त आफूलाई रक्सीको एलर्जी भएकाले कहिल्यै रक्सी नै नछुने बताइन् ।ती युवती शिक्षित युवती भएकाले ललाइ फकाइ बलात्कार सम्भावना पनि नरहेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । अन्ततः डाक्टरहरुले उनलाई सम्झाउन भरमग्दुर प्रयास गरेसँगै उनको शल्यक्रिया गरी बच्चा निकालियो ।
पेटमा बच्चा हुँदाहुँदै युवतीले आफू भर्जिन नै भएको र कसैसँग सेक्स नै नगरेको जिद्धी गर्दै आफ्नो कुमारित्वको परीक्षण गर्न माग गरेकी उनले नवजात बच्चा छोराको जिम्मेवारी नलिने अडान लिइन् । अस्पतालले नवजात शिशुलाई ती महिलाका बुवा–आमालाई सुम्पिएको छ ।